Chii chinonzi ray kuronda uye pane ipi vhidhiyo makadhi iyo inowanikwa? 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kana tichiverenga ongororo yemitambo mitsva yemavhidhiyo, isu tinowanzo sangana nezwi rekuti Ray kutsvaga kana zvasvika kumagirafu, kunyangwe kana paine vashoma vashoma vanoziva chaizvo zvazviri uye kuti nei zvave zvakakosha kuongorora kunaka kwekuratidzira kwemutambo. . Kunyangwe yakanonoka nguva yekupedzisira Ray kutsvaga ndeye yakaoma uye yakaoma tekinoroji kutsanangura Nekudaro, nenzira yakapusa, tinogona kupfupisa mashandiro ayo nemazwi ari nyore uye ari nyore kunzwisisa, kuitira kuti chero mushandisi anzwisise kuti sei kushandiswa kwayo mumitambo yechizvarwa chinotevera kwave kwakakosha.
Muchirongwa ichi tinokuratidza chii chinonzi ray kutsvaga uye tichakuratidzawo makadhi evhidhiyo anoitsigira, kuitira kuti tikwanise kumisikidza ichi chinhu nekukurumidza patinongovhura mutambo uyo unosanganisira kushandiswa kwetekinoroji (kazhinji zvinoratidzwa zvakanaka muongororo kana mune yekutarisa tebhu yechigadzirwa chakasarudzwa.
Ray kutsvaga gwara
Kutsvaga kwaRay kunonetsa kutsanangura, asi mashandiro ayo anofanirwa kuongororwa zvakakwana kuti unzwisise zvakanakira zvayinounza uye nei zvichikurudzirwa kuti ugare uchisiya ichishanda mumitambo inoitsigira (mambure ekadhi yemifananidzo yatinayo). Kana isu tisina inoenderana giraidhi kadhi isu zvakare tinokuratidza iwe ndeapi mamodheru atinogona kutenga kuti tiwane ray yekuteedzera mumitambo yePC.
Chii chinonzi ray kuronda?
Ray kutsvaga ndeye tekinoroji inoshanda pane optical geometry yekugadzirisa iyo nzira inogadzirwa nechiedza, ichitevera mwaranzi yayo kuburikidza nekudyidzana nenzvimbo. Chiedza chaicho chinoratidzwa pazvinhu zvese uye chinosvika paziso redu, icho chinodudzira icho sechiedza uye mavara; Mumutambo wevhidhiyo, iyi nzira inofanirwa kuverengerwa zvakaringana uchishandisa algorithm, kudzokororazve mhedzisiro yechiedza nemumvuri munzira yechokwadi inogoneka; parizvino yakanakisa algorithm yekudzokorora mwenje nemumvuri padhuze nephotorealism inoshandisa ray yekutsvaga kana ichipa iyo 3D mufananidzo.
Iine inoshanda ray yekutsvaga, iyo mimvuri yakanyatsotsanangurwa uye izvo zvinhu zvakavhenekerwa (mune chero mwenje) zvinoshamisa zvechokwadi, izvo zvinoita iyo yakajeka uye yakajeka mifananidzo mumutambo kunyanya nezvisarudzo zvakakwirira (4K UHD).
Iko kuderera kwe ray ray kuri zvazvinoita pakubata kwechero giraidhi kadhi- Kushanda nemagetsi emagetsi uye mimvuri kunoda iyo ine simba kwazvo GPU (pamwe yakagadzirirwa chipu yakatsaurirwa ray kutsvaga chete), yakawanda yevhidhiyo memory nzvimbo uye yakakwira simba rekushandisa. Kana isu tikasarudza kumisa ray yekutsvaga, isu tinowanzo mhanya kudonha mukuita kwese, izvo zvinotozoda zvinoda shoma marongero usati wawana kukodzera.
Schede vhidhiyo ine ray yekutsvaga
Isu takanakidzwa nehunhu hwemifananidzo ine inoshanda ray yekutsvaga? Kana kadhi redu revhidhiyo rangove rakaringana (2019 zvirinani), rinofanira kutsigira ray kutsvaga pasina dambudziko, ingo tarisa ako akasarudzwa marongero emutambo (anowanzo kuwanikwa sechinhu chakatsaurwaRTX kana yakafanana) kana inoitwa neakakwirira magrafiti kuisa kana Kumusoro-kumagumo). Kadhi redu revhidhiyo haritsigire ray ray? Tinogona kuzvigadzirisa ipapo nekusarudza imwe yematepi pazasi.
Kana isu tichida kutarisa pane kadhi yeNVIDIA kutora mukana wekutevera ray, tinokurudzira iyo Gigabyte GeForce RTX 3070, inowanikwa paAmazon isingasviki € 1000.
Pane ino kadhi revhidhiyo tinowana chechipiri chizvarwa Core RT, chip yakatsaurirwa ray kutsvaga iyo inovimbisa panguva imwe chete kupenya uye mafotorealistic mwenje, padanho nyowani rekuita kwerudzi urwu rwetekinoroji. Kuwedzera kune chaiwo optimizations ekutsvaga ray, isu tinowana zvakare yakavandudzwa kutonhodza sisitimu uye otomatiki yekuwedzeredza system, iyo inowedzeredza inowedzera kuwanda kweiyo GPU kana yakawanda computational kuverenga kuchidikanwa (senge patinoshandisa ray ray).
Kana isu tichida kutora mukana we ray kutsvaga nekadhi revhidhiyo ye AMD, tinokurudzira kuti iwe utarise SAPPHIRE NITRO + AMD Radeon RX 6800 XT OC, inowanikwa paAmazon isingasviki € 2000.
Nekadhi rino isu tinokwanisa kutora mukana weiyo AMD's advanced ray yekutsvaga, inochengetedzwa kuburikidza neyakaunganidzwa-inomhanya-mhanyisa CU cores (hapana chip yakazvitsaurira senge muNVIDIA asi kune huwandu hukuru hwemaminiprocessor anokwanisa kugadzira ese graphic zvinhu). Kana tichida mhinduro dzakachipa, tinokukoka iwe kuti uverenge gwara redu. Makadhi emavhidhiyo akanakisisa ePC.
Ko mitambo inonyaradza inotsigira ray kutsvaga?
Parizvino tataura nezve makadhi evhidhiyo ePc, asi kana tikachinjisa tarisiro kumatunhu ekugara, ndeapi anowirirana nekutevera ray? Zvinhu zviri sei manje PS4 uye Xbox One (chizvarwa chekare chinonyaradza) ray yekutsvaga haina kutsigirwanepo PS5 uye Xbox Series X kutsigira ray yekutsvaga kuburikidza nemaitirwo akapihwa nemakadhi eADD (sezvo ese ari maviri achishandisa vhezheni yechipikicha iripo mumakadhi evhidhiyo eADD azvino).
Kana isu tichida kubatsirwa nekutsvagisa ray pasina kutenga garish PC yemitambo chiteshi (kunyangwe pamusoro € 1200) ingo bata imwe yeaya maviri anotevera-gen emba yekutandarira uye inosundira marongero egirafu kusvika pakakwirira (mumitambo uko kune giraidhi yemhando yekusarudza inowanikwa). Kuti uwane rumwe ruzivo nezvenyaya yePS5, tinokurudzira kuti uverenge gwara redu Yakadii PS5? kuongorora uye gwara reiyo nyowani Playstation.
Ray kutsvaga kunogona kunyatso shandura yemazuva ano mitambo yemitambo, yakawanda kupfuura kungokwidza kana kutsungirira HDR kubvumidzwa - iri yakaoma uye yepamusoro algorithm, zvinotora nguva kusanganisa mumitambo yese, asi isu tichasvika padyo nayo. kuchokwadi photorealism.
PC yedu haitsigire ray yekutsvaga here? Mune ino kesi isu tichafanirwa kuita zvakakosha zvakakosha mukuwedzera kune vhidhiyo kadhi; kuziva zvakawanda isu tinokukurudzira kuti uverenge vatungamiriri vedu Hardware zvinodiwa uye zvakatemwa zvekutamba mitambo yemavhidhiyo pakombuta yako mi Iyo Yakanyanya Simba PC Yakambove - yanhasi Zvakanakisa Hardware Zvikamu. Kana, pane kudaro, isu tichida kutamba mitambo yePC paterevhizheni (pachinzvimbo checonsole), tinokurudzira kuti uverenge kudzidza kwedu zvakadzama. Maitiro ekutamba mitambo yePC paTV.